Nubico Premium ကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာပြီး၎င်းကိုမည်သို့အခမဲ့ကြိုးစားရမည်ကိုရှာဖွေပါ eReaders အားလုံး
Nubic ယနေ့ခေတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သာမကကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိလူသိအများဆုံးစာဖတ်စင်များအနက်မှအကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ လူအများစုက၎င်းကိုဂီတလွှင့်ထုတ်လွှင့်ဝန်ဆောင်မှု Spotify နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ၎င်းသည် Nubico ကဲ့သို့လစဉ်သေးငယ်သည့်ပမာဏအတွက်ငွေပေးချေမှုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအမြောက်အများကိုပေးသည်။
ဤလူသိများသောစာဖတ်ခြင်းပလက်ဖောင်းသည် Nubico အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံပြီးသည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမှပေးသောဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးမှ subscribe နှင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်နှင့် Nubico Premium ဖြစ်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာယူရိုငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မီ Nubico ပရီမီယံကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းမည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အဆင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
1 Nubico ဆိုတာဘာလဲ
2 Nubico Premium ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
3 ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွက် Nubico Premium အခမဲ့ရရန်
4 Nubico Premium မှမည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သော Nubico သည်ဈေးကွက်တွင်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် ဒီဂျစ်တယ်ဖတ်ခြင်းပလက်ဖောင်း၊ လစဉ်ငွေပေးချေမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ eReader, tablet သို့မဟုတ် mobile device ကို သုံး၍ အကန့်အသတ်မရှိဖတ်နိုင်သည်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောသီးခြား application တစ်ခုရှိသည့်အတွက်။
Nubico Premium သုံးစွဲသူများရရှိနိုင်သည့်ကတ်တလောက်သည်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အားသာချက်ရှိပြီး multi-device ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဥပမာအားဖြင့်စက်တစ်ခုပေါ်တွင်စာဖတ်ခြင်းကိုစတင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နေသည့်စာအုပ်နောက်သို့လိုက်ရန်နှင့်ပြီးမြောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အခြားဖတ်ပါ။ ၎င်းသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်သွားလာရပြီးကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းတွင်ဖတ်လိုသည်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့အတွက်မသက်မသာဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Nubico လျှောက်လွှာ download link များ ဒါကြောင့်မင်းတို့ထဲကအများဆုံးရနိုင်အောင်၊
ကုန်ချ ဒီမှာ iOS အတွက် Nubico ပရီမီယံ။
ကုန်ချ ဒီမှာ Android အတွက် Nubico Premium
Nubico Premium ကဘာကိုကမ်းလှမ်းတာလဲ။
ပထမ ဦး စွာ Nubico Premium သည်အခွန် ၈.၉၉ ယူရိုအပါအ ၀ င်လစဉ်စျေးနှုန်းရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေလိုသော်လည်းအခမဲ့စမ်းသပ်မှုလမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုအောက်တွင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာမည်သို့ရှင်းပြရမည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
ဤလူကြိုက်များသောပလက်ဖောင်း၏ Premium ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သည် စာအုပ်ပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် format ဖြင့်ရယူသုံးစွဲနိုင်သည်၎င်းတွင်သတင်းစာအမြောက်အမြားကိုတွေ့ရလိမ့်မည်၊ စာပေသမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်အချို့နှင့်မည်သည့်စာဖတ်သူအတွက်မဆိုမည်သည့်စာဖတ်သူအတွက်မဆိုအလွန်ကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရရုံသာမကဘဲစာအုပ်တွေလည်းပျော်နိုင်မှာပါ မဂ္ဂဇင်း ၄၀ ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် နှင့်၎င်းကိစ္စရပ်များကိုနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်လစဉ်အသစ်သက်တမ်းတိုးသည်။
ဤအမျိုးအစားရှိအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်တွေ့ရသကဲ့သို့ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများတစ်ခုမှာလစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအတွက်ငွေပေးချေခြင်းသည်ကြေငြာမှုများနှင့်မည်သည့်အခြားလူသိရှင်ကြားအမျိုးအစားမဆိုပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လုပ်ဖို့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွက် Nubico Premium အခမဲ့ရရန်
ဖြတ်. ဒီ link ကို ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွက် Nubico Premium အခမဲ့သုံးဆောင်ပါမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။
အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Nubico သို့သူတို့ကိုကြိုဆိုသည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ Nubico ပရီမီယံရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကာလကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးမည်ဖြစ်ပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမည်မျှကြာရှည်မည်ကိုဖော်ပြသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အောက်ပါသတင်းစကားကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။
Nubico Premium မှမည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်က Nubico Premium အတွေ့အကြုံကိုမယုံကြည်ပါကသို့မဟုတ်စာမဖတ်ရန်ပယ်ဖျက်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဟုသင်ထင်မြင်ယူဆလျှင်၊ ဘာကိုဖတ်ရမှန်းမသိသောကြောင့်၊ ဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်တွင်ဖြစ်တတ်သော၊ သို့မဟုတ်သင်ယူရို ၈.၉၉ မကုန်ချင်သောကြောင့် \_ t လစဉ်လစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ Nubico Premium မှမည်သို့မည်ပုံစာရင်းသွင်းရမည်ကိုရှင်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်အခမဲ့စမ်းသပ်ကာလအတွင်းသင် Nubico Premium ကိုကြိုးစားနေပါကသင့်အားမည်သို့မည်ပုံပယ်ဖျက်မည်ကိုရှင်းပြပါမည်။ ကသည် "My account" ကိုသွားပြီး Nubico Premium ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလိုစာတစ်စောင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။;
Nubico Premium trial လကုန်ဆုံးချိန်တွင်“ Start now” ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မနှိပ်မိပါကဝန်ဆောင်မှုကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ခံစားလိုပါက“ Start now” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Premium အသုံးပြုသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်လိုပါက“ My account” ကိုထပ်မံ ၀ င်ပြီး“ Nubico Premium” tab ကို ၀ င ်၍ သင်ဖတ်နိုင်သောခလုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်စဉ်းစားနေပါသလား။။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းသည်ငွေပေးချေပြီးသောငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပေးသွင်းသည့်နောက်ဆုံးနေ့အထိစာအုပ်စာရင်းကိုခံစားနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်ဖြစ်သော်လည်းထိုအခြိနျမှစ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာမကျဘဲနေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်စာရင်းပေးသွင်းလိုပါကသင်မှတ်ပုံတင်သည့် နေ့မှစ၍ ထိုအခကြေးငွေကိုသင်ပေးချေလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Nubico Premium ကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာပြီးမည်သို့အခမဲ့ကြိုးစားရမည်ကိုလေ့လာပါ
မက္ကဆီကိုမှ:“ စျေးဝယ်ခြင်း၊ http://nubico.es သူတို့စပိန်အပြင်ဘက်ကနေခွင့်ပြုမထားပေ။
မာရီယာ Sotes ဟုသူကပြောသည်
ငါဒေါသထွက်နေတယ် Nubico နှင့်လေးနှစ်နေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ကဒ်သက်တမ်းကုန်သွားပြီးကဒ်အသစ်ကိုထည့်ရန်မေ့နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအမှားပြင်ဖို့ခွင့်မပြုဘူး၊ အကောင့်ပြန်လုပ်ဖို့လည်းငွေမပေးဘူး၊
၁။ ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်အပြီးသတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းပါ (ချက်ချင်းမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်) ။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်စာအုပ်အသစ်များကိုကူးယူ။ မရပါ။
၂။ အကောင့်အသစ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာကြည့်တိုက်ကိုဆုံးရှုံးပါ။ (တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှစာအုပ်တစ်အုပ်တွင်လေးနှစ်ကျော်ပြီးနောက်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ငိုချင်သည်)
ဒီတတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော် ဦး ဆောင်ခဲ့တာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ငါကလုပ်တော့မယ်၊ ဒါဆိုငါကန့်သတ်ချက်မရှိအောင်ကြိုးစားတော့မယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ စာမဖတ်ဘဲမသွားနိုင်ဘူး၊ ငါ့ကုထုံးပဲ! ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအနည်းဆုံးတစ်လလောက်ကောင်းတဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်တယ်။